ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကေအိုင်အေ စစ်ဦးစီးချုပ် ဂွမ်ထန် ဂန်ရှောင်၏ ပြောကြားချက် (ရုပ်သံ)
ကေအိုင်အေ စစ်ဦးစီးချုပ် ဂွမ်ထန် ဂန်ရှောင်၏ ပြောကြားချက် (ရုပ်သံ)
သိပ်ကောင်းတဲ့ အင်တာဗြုးပါ။ ဦးစီးချုပ်ပြေားသွားတဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်ကို လူအသက်အရွယ်နဲ အတွေအကျုံရှိတဲ့သူတိုင် ခန့် မှန်နိင်ကြမှာပါ။ သူဟာ ဘာသာတရားကို တန်ဖိုးထားတယ်၊ လူမျိုးကို တန်ဖိုးထားတယ်။ လွတ်လပ်မှု့ ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ ပင်လုံစာချုပ်ကိုလည်တန်ဖိုးထားတယ်။ မြန်မာပြည်ကိုလည် တန်ဖိုးထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်သူမှရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိ့ရှိနိင်ပါတယ်။ သူပြေားသွားတာ သိပ်ကောင်ပါတယ်။ ကျွှန်တော်တို့မြန်မာအစိုးရနဲ စစ်တပ်ကတော့ ဘုရားမေ့ တရားမေ့ ဘာသာမေ့ တိုင်ပြည်မေ့ လူမျိုးမေ့ နိင်ငံမေ့ သူတို့ က သူများကို ဘိန်းသွားကျွေးနေတော့ သူတိုကို ဘုရားက ပြန်ဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ ဘိန်းစွဲးနေတဲ့ ဘိန်းစား အစိုးရလို ပြန်မပြေားနိုင် မတာရားမှန်းသိ့ရက်နဲ ပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့ ဘါန်းစွဲးတွေလိုဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာ အစိုးရနဲ မြန်မာ စစ်တတ်က တေားထဲးက တေားဝက်သိုးတွေလိုပါပဲ။ တော့ထဲးက တေားဝက်သိုးတွေဟာ တနှာစိတ်နဲပဲ တေားဝက်မကို မိတ်လိုက်ဖို့ စိတ်သန်တယ်။ မိတ်လိုက်ပြီးလို ဇီးရပြန်တော့လည်း ဂရုမစိုက်ပဲ ပြစ်ထားတယ်။ တေားဝက်မက ရလာတဲ့ ဒီဖီးကို မေါးဖို့ဝတ်ကျင်း ၀က်သိုက်လုပ်ရတယ်။ ကိုယ်ဘာကိုယ် တစ်ကောင်ထဲ တေားဝက်ကလေးတွေကိုမွေရတယ်။ အဲလိုမွေးပြီး ပေါက်ဖွားလာတဲ့ တေားဝက်ကလေးတွေကို မိတ်လိုက်တဲ့ တေားဝက်ထိးကြီးက ချောင်းမြောင်းပြီး တေားဝက်မကြီး အလစ်မှာ တေားဝက်အပေါက်လေးတွေကို ၀င်ဆွဲးပြီါ် ပြန်ကိုက်သတ်စားပြစ်တယ်။ မြန်မာ စစ်အစိုးရဟာလည်း တော့းဝက်အထိးလိုပါပဲ မြန်မာနိင်ငံကို တနှာ စိတ်နဲ မိတ်လိုက်ဖို့ ပဲ စဉ်စားတယ်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို လစ်ရင် လစ်သလို ချောင်းပြီး ကိုက်သတ်စားဖို့ ပဲ စဉ်စားနေတဲ့ တေားဝက်သိုးလိုပါပဲ။ စားမယ် သောက်မယ် မေထုံမှီဝဲမယ်ဆိုတဲ့ တရိဆ္တန်စိတ်ပဲ စစ်အစိုးရကို ရှုံချပါတယ်။ ကျွှန်တော် မြန်မာလူမျိုးပါ KIA ၏ စိတ်ဓါတ်ကို ထောက်ခံပါသည်။ မကျေနပ်တဲ့သူ တေားဝက်မလို မှတ်မည်။
God bless kachin state and kio, kia
I will pray for end war burma war.God is the best on world.
I don't like kachin
Kachin head master please don't talk about religion. Please talk about how we improving of the country.suggest the laws. Don't separate the religion. You can come and learn the Singapore law.Indonesian law.China law.or UK law.alot of law having.please talk about law.don't say religion. If you talking about Christian or muslin or Buddha. That is nonsense. How much leader knowledge do you have?just talk about knowledge. Don't separate religion. Every country have alot alot of religion.
ဘာသာရေး ခွဲခြားမူသည် အစွန်းရောက် အခြေအနေ
I understand all his valid points regarding politics.........But how canawar is blessed by GOD??????????? God and War is totally separate matters. Crazy Idea ........
ဘုရားသခင်နဲ့ စစ်ပွဲ့နဲ့ ဆက်စပ်ရင် ဘင်လာဒင် လိုဖြစ်
Wut Mon said...
အရင် စစ် အစိုးရကော၊ လက်ရှိဦးသိန်းစိန် အစိုးရကော မကြိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို မကြိုက်တိုင်း အစိုးရနဲ့တိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့တိုင်းကို ယုံတတ်တဲ့ နုံချာချာ တစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ပါ။ လူ့လောကမှာ လူလည်မှန်းကြည့်ရုံ စကားနားထောင်ရုံနှင့်သိသောသူကို သိပ်မကြောက်ရပါ။ ကိုယ်ကသိပြီးဖြစ်လို့ သတိထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင်က ကြည့်တော့ ရိုးသားတဲ့ ပုံနှင့် အတွင်းမှာ ဥာဏ်များသူကိုတော့ ပိုကြောက်ဖို့လိုပါတယ်။
အခု ဦးဂမ်ရှောင်ပြောသမျှမှာ ထောက်စရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံး အချက်ကတော့ ကေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင်တွေမှာ လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲ ပြင်းထန်နေပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးရောထွေးနေပါတယ်။ ဘယ်ဘုရားသခင်ကမှ စစ်ကို အားမပေးပါဘူး။ ဒါကို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးတဲ့ စစ်ဆိုပြီး ဘုရားကို ပုံချထားပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အကူအညီ ဘယ်ကမှမရဘူးဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။ အမေရိကန်၊ အင်ဒိရ ကအကူအညီမရဘူးဆိုတာတော့ ဟုတ်ပေမယ့် တရုတ်ဆီက အကူအညီမရဘူးဆိုတာတော့ လိမ်တာပါ။ တရုတ်ဆီက နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ တရားဝင်သာမရရင်နေမယ် တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ ရဲ့ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုး၊ လူပုံစံ အမျိုးမျိုး အောက်မှာ အကူအညီတွေရနေပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း လောပန်တွေက ပေးတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် နိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတ တွေကို သူခိုးဈေးနဲ့ တရုတ်ကို ပြန်ရောင်းပေးနေရတာပါ။ စစ်အစိုးရနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကြားက တရုတ်က အမြတ်ထွက်နေတာပါ။ အဲ့ဒီလိုမရပဲ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို စစ်လက်နက်တွေ ဝယ်နိုင်မှာလည်း။ တရုတ်ဆိုတာ ငွေရရင်၊ အချောင်ရရင် အကုန်လုပ်ပါတယ်။ ဗမာလက်အောက်မှာ second class citizen ပုံစံနဲ့ မနေချင်ဘူးဆိုပြီး တရုတ်လက်အောက်မှာ PRC subject ပုံစံနဲ့ နေချင်နေသလားတော့မသိပါ။ subject ဆိုတာ second class citizen ထက်တောင်နိမ့်ပါတယ်။ ဒီလို ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းချပြီးရလာတာကို ဘုရားက အားလုံးစီမံပေးသလိုလိုနဲ့ ပြောနေတာ လိမ်တာမဟုတ်လို့ဘာပါလဲ။ ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ တရုတ်မျက်နှာကြည့်ရသလား မကြည့်ရဘူးလား မြစ်ဆုံစီမံကိန်းတုံးက KIO ဘာသံမှ မထွက်ခဲ့တာကို ကြည့်ပါ၊ တရုတ်လုပ်တာကိုမကြိုက်တာမဟုတ်၊ မြန်မာအစိုးရ ကချင်ပြည်နယ်မှာ လာလုပ်တာကိုသာမကြိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့ ၁၇ နှစ်လုံးလုံး ငွေကြေး ချို့တဲ့ ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလိမ်ပါသေးတယ်။ အဖွဲ့အစည်းမှာ တကယ် ငွေကြေးချို့တဲ့တာလား၊ အထက်ပိုင်းက လူတွေ တကိုယ်ကောင်းဆန်ခဲ့တာလား ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိဆုံးပါ။ အခု KIA ခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်မှာ နေသလဲ၊ ဘယ်လို property တွေပိုင်ဆိုင်နေသလဲ အစစ်ခံနိုင်ပါသလား။ ပြောရရင်တော့ အများကြီးပါပဲ။ ခြုံပြီး ပြောရရင်တော့ KIO/KIA မှာ ဒီလောက် ခေါင်းဆောင်မှု အရည် အချင်းလောက်ရှိရုံနဲ့၊ ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးလောက်တွေ ရှိရုံလောက်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်လာစရာ မရှိပါ။ ဆုတ်ယုတ်ဖို့သာရှိပါတယ်။
မြန်မာ အစိုးရ အဆက်ဆက်ကတော့ ဓါတ်ပြားဟောင်းမို့လို့ မဖွင့်တော့ပါဘူး။
အားလုံး တွေးတော ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
ုဘာသာရေးသက်သက်ကိုဦးစားပေးပြောသွားရတာကတော့နဂိုကမှလူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲရှိရင်းစွဲကတကြောင်း။လာပြီးတော့ဗျူးတဲ့သူကလည်းသတင်းထောက်မဟုတ်ဘူးဗျ ဗန်ကောက်အခြေစိုက်(MCA)မြန်မာခရစ်ယာန်များအဖွဲ့ကဦးစိုင်းအေးလို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးဆ၇ာတယောက်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘုရားသာမကျွေးရင်ထမင်းငတ်ပါတယ်လို့ယူဆထားတဲ့လူတွေဆိုတော့ ဒီအကြောင်းကိုပဲဦးစားပေးမေးသွားတာပါ ။ ဘုရားစီစဉ်လို့ပဲ တိုက်နေရတဲ့စစ်ပွဲဆိုတော့လည်းဆက်တိုက်ကြပါစေပေါ့ဗျာ ။ ဘုရားခေါ်တော့လည်းလိုက်သွားဦးပေါ့ ညစ်ပါတယ်။
Kachin Leader you are narrow minded.you must change KIA to God Army.....
I lost my impress upon KIA leaders after listening this interview.Very narrow minded. How can God create the war? If God create War as KIA leader said, Your God will be killer.
matthew lian said...
People never say We are strong or we are the best in the world. Because we Believe In GOD. Not Buddha. May God Bless Kachin people all.
လာဘ်စားတဲ့ အရာရှိ၊ လာဘ်စားတဲ့ရဲ ဆိုတာ ကချင် မူးယစ် ဆေးဖြန့်လည်း ငြိမ်နေမှာပဲ၊ ဗမာ မူးယစ်ဆေးဖြန့်လည်း ငြိမ်နေမှာပဲ၊ ကချင်ကိုရောင်းလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်မှာပဲ၊ ဗမာကိုရောင်းလည်းမသိချင်ယောင်ဆောင်မှာပဲ။ ကချင့်နယ်မြေမှာ လက်နက်ကိုင်ထားတာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရချင်လို့ပြောပြီး မူးယစ်ဆေးကျတော့ ဗမာလုပ်တာဆိုပြီးလွှဲချတယ်၊လူမျိုးတုံးလုပ်နေတယ်ဆိုပြီး ဇာတ်လမ်းစချင်နေမှန်းသိသာတယ်။ ဗမာတွေက မူးယစ်ဆေးသုံးရင် သိပ်မစွဲတတ်ဘူးဆိုပဲ၊ ရန်ကုန်က စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံကို လာကြည့်ပါဦး အမြင်ကျဉ်း ကချင်ခေါင်းဆောင်ကြီးရေ။။။
ကောင်ဆိုး ကလေး said...
For KIA leaders and other religious persons please watch this lists.
After you watched you will know what it is.
Many of you guys too crazy about unseen god.
According to Prof Howking there is no god our planet was born by big bang. After Big Bang time started.
If god created, what is the proof.
ဘာသာရေး သိပ်လိုက်စားတဲ့ လူတွေ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ပါ။ အမှန်၊ အမှားမသိရင် မိတ္ဆာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြီးမှ ယုံမယုံ ကိုတိုင်ဆုံးဖြတ်။
ဒါတွေက BBC ကလွှင့်တာပါ။ ဒီdoucumentry လုပ်သူတွေလဲ ပါမောက္ခတွေပါ။
ဟိုတလောက KIA ဗိုလ်ကြီး တစ်ယောက် ပြောသွားတဲ့
ခတ်တုံးတုံး ခေါင်းဆောင် ဆိုတာ ဒီလူကို ပြောတာ
ဖြစ်လိမ့်မယ် သူ့ အနေအထိုင်က ကျော့နေတာဘဲ
အောက်ကလူ တွေနဲ့ တခြားစီဘဲ
မဟာဝါဒကျဆုံးရမည်- မဟာဝါဒသမားတွေအတွက် နောက်ဆယ်နှစ်မှ ကုန်းကောက်စရာမရှိစေရ
အရှက်မရှိတဲ့ကောင်တွေမင်းတိုဘာပြောနေကြတာလဲမင်းတိုအိမ်မှာဆန်ကောရှိလားသွားပြန်ကြည်အုံ့ ကိုယ့်အိမ်မှာဘာရှိလဲမရှိလဲမသိဘဲပြောနေကြတယ်မင်းတို့ကောကိုယ်လူမျိုးတွေအတွက်ဘာလုပ်ပေးပြီးပြိလဲ စောက်ရူးတွေ
တပ်မတော် တပ်ရင်းတွေနဲ့ KIA ရဲဘော်တွေအသိဆုံးပါ
တကယ်အေးချမ်းချင်တဲ့ စိတ်ထားလေးသာ မွေးပါ ငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရ
goonwell thu said...
All military people using brainwash system.
Now Kachin using religious to let people brainwashing.
Very narrow minded. If Kachin think always Burma, Kachin like different feel in their mind, will not get any peace.
Because they are greedy and crazy.
Pinlone contract is not for you, for all Myanmar Country. Pls. take note Ko Kachin.
who deleted my previous comment/
there was nothing about rude
anyway waste of time to talk this bull shit leader.
AHhhhhhhh.....what do u means ..kachin leader.....be aware yr dialogue ,...u are one of our nationals...not from china naw....yr talking style seems gossips in public..not looks like wisdom thinking sences...yr region, yr state is hilly reagion.....just because of geography ,,,,,,yr state is not develope as others parts around the world hilly region .....dont think because of barma..
ဘုရားသခင်အလိုကျ ဘုရားသခင်ဖန်းဆင်း ပါတယ်
ကောင်းကင်ဘုံ သို့မဟုတ် ငရဲဘုံသို့ အားလုံးသွားကြ
စေသော် ။ အာမင် Good ... Good